गर्भवस्थामा थाइराइड कति जोखिमपूर्ण ? – Naya Suchana
थाइराइडको बारेमा जनचेतना जगाउनका लागिआज भोलि धेरै कार्यक्रम र क्याम्पेनहरुको योजनाहरु पनि तयार हुँदैछ । प्रायः महिलाहरुमा हाइपोथायराडिज्म हुन्छ, जसको कारण थाइराइड ग्ल्याण्डले उचित मात्रामा हर्मोन बनाउन सक्दैन । थाइराइडको उपचार सहजै हुन सक्ने भएकाले समयमा नै यसको उपचार गर्नु आवश्यक हुन्छ । थाइराइड भएका महिलामा अनियमित महिनावारी हुने र गर्भमा बच्चा बस्ने सम्भावना पनि अति कम हुन्छ । त्यसैले गर्भवती भएको थाहा हुना साथ टीएसएचको परिक्षण गराइहाल्नु पर्छ । शुरुमा यसका कुनै लक्ष्ँण नदेखिने भएकाले महिलाहरु यसलाई वेवास्ता गर्छन् ।
यदि आफ्नो शरीरमा यस्ता प्रकारका समस्याको अनुभव गर्नु भयो भने तुरुन्त चिकित्सक कहाँ जानु आवश्यक छ ।
प्राय २५ देखि ४५ बर्षसम्मका महिलाहरुलाई थाइराइड स्क्रिनिङ गर्नु आवश्यक छ । यो उमेरमा महिलाहरु गर्भवती हुने र बच्चा जन्माउने र उनीहरु पालनपोषण गर्ने भएकोले यो उमेरका महिलाहरुलाई थायराइड स्क्रिनिङ अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।
← मान्छेले जस्तै बोटबिरुवाले पनि कुराकानी गर्न सक्छन् ?
२३ सय सरकारी कार्यालयसँग २ अर्ब ८२ करोडका फर्निचर, १ अर्ब १९ करोडका मोटरसाइकल →
खाली पेटमा के नखाने ?
देलखामा छ यस्तो अचम्मको शिला दर्शन गरि पढेर ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस